Jọshụa 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Jọshụa nwa Nọn wee si na Shitim+ zipụ ndị ikom abụọ na nzuzo dị ka ndị nledo, sị: “Gaanụ lee ala ahụ, tinyere Jeriko.” Ha wee gaa ma bata n’ụlọ nwaanyị akwụna nke aha ya bụ Rehab.+ Ha wee rahụ n’ebe ahụ. 2 E wee gwa eze Jeriko, sị: “Lee! Ndị ikom si n’etiti ụmụ Izrel batara ebe a n’abalị a iledo ala anyị.” 3 Eze Jeriko wee zigara Rehab ozi, sị: “Kpọpụta ndị ikom ahụ bịakwutere gị, ndị batara n’ụlọ gị, n’ihi na ọ bụ iledo ala a dum ka ha bịara.”+ 4 Ma nwaanyị ahụ kpọọrọ ndị ikom abụọ ahụ zoo. O wee sị: “N’ezie, ndị ikom ahụ bịakwutere m, ma amaghị m ebe ha si bịa. 5 O wee ruo na mgbe chi jiwere, mgbe a chọrọ imechi ọnụ ụzọ ámá,+ ndị ikom ahụ pụrụ. Amaghị m ebe ndị ikom ahụ gara. Chụwanụ ha ọsọ ọsọ, n’ihi na unu ga-achụkwuru ha.” 6 (Otú ọ dị, ya onwe ya akpọgowo ha n’uko ụlọ,+ o zokwara ha n’ebe e debere okporo ogho n’ùkwù n’ùkwù n’uko ụlọ.) 7 Ndị ikom ahụ wee chụrụ ha gawa n’ụzọ gara n’ebe a na-eji ụkwụ agafe osimiri Jọdan,+ ha wee mechie ọnụ ụzọ ámá ozugbo ndị na-achụ ha pụrụ. 8 Ma tupu ha edinara ala, ọ bịakwutere ha n’uko ụlọ. 9 O wee sị ndị ikom ahụ: “Amaara m na Jehova ga-enye unu ala a,+ nakwa na ụjọ unu ejidela anyị,+ nakwa na obi na-alọ ndị niile bi n’ala a mmiri n’ihi unu.+ 10 N’ihi na anyị anụwo otú Jehova si mee ka mmiri Oké Osimiri Uhie takọọ n’ihu unu mgbe unu si n’Ijipt pụta,+ nụkwa ihe unu mere eze abụọ nke ndị Amọraịt bụ́ ndị nọ n’ofe Jọdan, ya bụ, Saịhọn+ na Ọg,+ bụ́ ndị unu lara n’iyi.+ 11 Mgbe anyị nụrụ ya, obi malitere ịlọ anyị mmiri,+ ọ dịghịkwa ume ọ bụla dị n’ime onye ọ bụla n’ihi unu,+ n’ihi na Jehova bụ́ Chineke unu bụ Chineke n’eluigwe nakwa n’ụwa.+ 12 Ugbu a, bikonụ, jirinụ Jehova ṅụọrọ m iyi na,+ ebe ọ bụ na egosiwo m unu obiọma,* unu onwe unu ga-egosi ezinụlọ nna m obiọma,+ unu ga-enyekwa m ihe ịrịba ama a pụrụ ịtụkwasị obi.+ 13 Unu ga-ahapụkwa nna m+ na nne m na ụmụnne m ndị nwoke na ụmụnne m ndị nwaanyị na ndị niile bụ nke ha ndụ, unu ga-anapụtakwa mkpụrụ obi anyị n’aka ọnwụ.”+ 14 Ndị ikom ahụ wee sị ya: “Mkpụrụ obi anyị ga-anwụ kama unu onwe unu ịnwụ!+ Ọ bụrụ na unu akọghị banyere ihe a anyị bịara, ọ ga-erukwa na mgbe Jehova ga-enye anyị ala a, anyị ga-egosi gị obiọma na ikwesi ntụkwasị obi.”+ 15 E mesịa, o mere ka ha si na windo jiri ụdọ rịdaa, n’ihi na ụlọ ya dị n’akụkụ mgbidi, ọ bụkwa n’elu mgbidi ka o bi.+ 16 O wee sị ha: “Gaanụ n’ógbè bụ́ ugwu ugwu, ka ndị na-achụ unu ghara inweta unu; zoonụ n’ebe ahụ ruo ụbọchị atọ, ruo mgbe ndị na-achụ unu laghachitere, e mesịa, unu alawa ebe unu na-ala.” 17 Ndị ikom ahụ wee sị ya: “Aka anyị dị ọcha banyere iyi a i meworo ka anyị ṅụọ.+ 18 Lee! Anyị ga-abata n’ala a. Ị ga-ekegide eriri uhie a na windo a i mere ka anyị si na ya rịdata, ị ga-akpọkọtakwa nna gị na nne gị na ụmụnne gị na ndị ezinụlọ nna gị dum n’ụlọ a ị nọ.+ 19 Ọ ga-erukwa na onye ọ bụla nke si n’ọnụ ụzọ ụlọ gị pụọ n’èzí,+ ọbara ya ga-adị ya n’isi, ikpe agaghịkwa ama anyị; onye ọ bụla nke gị na ya nọ n’ụlọ a, ọbara ya ga-adị anyị n’isi ma ọ bụrụ na e bie ya aka. 20 Ọ bụrụkwa na ị kọọ banyere ihe a anyị bịara,+ aka anyị ga-adị ọcha banyere iyi a nke i mere ka anyị ṅụọrọ gị.” 21 O wee sị: “Ka ọ dịrị ka unu kwuru.” O wee sị ha lawa, ha alawa. E mesịa, o kegidere ụdọ uhie ahụ na windo. 22 Ha wee lawa, rute n’ógbè bụ́ ugwu ugwu ma nọrọ n’ebe ahụ ruo ụbọchị atọ, ruo mgbe ndị na-achụ ha laghachiri. Ndị ahụ na-achụ ha wee na-achọgharị ha n’okporo ụzọ niile, ma ha achọtaghị ha. 23 Ndị ikom abụọ ahụ wee si n’ógbè bụ́ ugwu ugwu gbadaa ọzọ ma gafee osimiri wee bịakwute Jọshụa nwa Nọn, ha wee malite ịkọrọ ya ihe niile mere ha. 24 Ha wee sị Jọshụa: “Jehova enyefewo ala ahụ dum n’aka anyị.+ N’ihi ya, obi na-alọ ndị niile bi n’ala ahụ mmiri n’ihi anyị.”+